Nuqul ka sameynta nuqulku caadi maahan | Martech Zone
Nuqul ka Koobiyuhu Maaha Sax
Arbacada, Juun 8, 2011 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Marka hore afeeftayda: anigu waxaan ahay ma ahan qareen. Maaddaama aanan ahayn qareen, waxaan qormadan u qori doonaa fikrad ahaan. On LinkedIn, a wada hadalka wuxuu ku bilaabmay su'aasha soo socota:
Ma sharci baa in dib loo soo qoro maqaallada iyo waxyaabaha kale ee aan ka helo macluumaad ku saabsan boggeyga (dabcan siinta dhibcaha qoraaga dhabta ah) mise waa inaan la hadlaa qoraaga marka hore…
Waxaa jira jawaab fudud oo quruxsan tan laakiin waxaan gebi ahaanba kuxiranyahay jawaabta dadka badan ee wadahadalka. Dadka intiisa badani waxay ku jawaabeen talo taas oo ahayd, runtii, sharci si dib loogu qoro maqaallada ama waxyaabaha ay ka heleen macluumaad ku saabsan bartooda. Dib u soo dir qodobbada? waxa ku jira? Oggolaansho la’aan? Miyaad tahay nuts
Doodda sharciga ah waxay ku socotaa waxa ka mid ah adeegsiga caddaaladda iyo sidoo kale illaa iyo inta xuquuqda lahaanshaha ay u ilaalineyso shirkad ama shaqsi haddii waxyaabahaaga ay ku soo baxaan bog kale Sida qof wax u qoro tan, waxaan gabi ahaanba kuu sheegi karaa inay khalad tahay. Ma dhihin waa sharci daro… waxaan idhi waa sharci khalad.
Si la yaab leh, Mabda waxay i siisaa tirakoob in waxyaabaha aan ka kooban yahay ay soo guuriyaan in ka badan 100 jeer maalintii martida. 100 jeer maalintii !!! Waxyaabahaas waxaa badanaa loogu qaybiyaa emayl… laakiin qaar ka mid ah ayaa ka dhigaya bogagga dadka kale. Qaar ka mid ah waxyaabaha ku jira waa shay-baarayaal - laga yaabee inay ka dhigayaan mashruucyo shabakadeed.
Shakhsiyan miyaan dib u daabacaa waxyaabaha? Haa… laakiin had iyo jeer ogolaansho ama adoo raacaya siyaasadda bogga abuuray nuxurka. Fadlan la soco in aanan dhihin dhaca. Ku tuurista gadaal gadaal macluumaadka aad soo dhigtay macnaheedu ma aha ogolaansho… ogolaansho waa in si cad laguu siiyaa. Had iyo jeer waxaan haystaa shirkadaha tikniyoolajiyada suuqgeynta iiga dhiga barxadooda ama barnaamijyadooda software halkii aan ka qaban lahaa shaqada adag ee qorista dib u eegis buuxda, inta badan waxaan weydiiyaa waxyaabaha muhiimka ah ee ay jeclaan lahaayeen inay ka dhigaan boostada. Waxay siiyaan iyaga permission ogolaansho la muujiyey si ay u daabacaan.
Xuquuqda daabacaadda ka baxsan, waxaan u muuqdaa inaan ku qaldamo dhinaca isticmaalka Creative Commons. Hal abuur leh wuxuu si cad u qeexayaa in shaqada goobta ka socota ama aan la koobiyeyn karin sifo keliya, iyada oo aan loo eegin, ama inay u baahan tahay ogolaansho dheeraad ah.
Xilliga meherad kastaa ay noqonayso mid daabacan mawduuc, duufsashada nuqul ka sameynta iyo dhajinta boostada oo lala wadaago waxyaabaha qof kale ka kooban yahay ayaa xoog badan. Waa tallaabo khatar ah, in kastoo, taasi ay maalinba maalinta ka dambeysa halisteedu sii kordheyso (kaliya weydii dadka wax qora ee wax qora ee internetka wax ku qora inay dacwoodaan Midig). Iyadoo aan loo eegin inay dacwaduhu ansax yihiin iyo in kale… in badhida lagugu jiido maxkamadda iyo inaad yeelato qareen si uu kuu ilaaliyo waa waqti qaadis iyo qaali.
Ka fogow adoo qoraya waxyaabaha aad ka kooban tahay. Kaliya maahan waxa aaminka ah in la sameeyo, sidoo kale waa waxa fiican in la sameeyo. Waxaan ku bixinay waqti iyo dadaal aad u badan sidii loo horumarin lahaa barahayada (sida shirkado badan oo kale). In waxyaabahaaga kor loo qaado oo lagu soo bandhigo barta kale… soo jiidashada labada dareenba mararka qaarkoodna xitaa dakhliga… waa iska caadi.
Image: Bart Simpson Sawirada - Pictures
Isha Madow ee Google Panda
Jun 9, 2011 saacadu markay ahayd 4:45 AM
Saaxiib waxaad gabi ahaanba ku saxantahay sharciga oo dhan iyo qalad. Maaha wax sax ah waana xadka xuduudaha mararka qaar. Waxaan aqriyay meelaha qaar oo 10 ilaa 20% ay kuxirantahay amaahda + iskuxirka, wax walbana waxay kuxiranyihiin macnaha guud. Satire, "collages" iyo nooc kale oo walxo ah ayaa wax yar ka dabacsanaada.
Laakiin waa inaan idhaahdaa ogolaashaha ayaa loo baahan yahay oo keliya haddii aad "dib-u-dhigto" wax walba ama qayb weyn oo ka mid ah.
Tusaale ahaan, haddii aan gabal ku qorayo baraha bulshada oo aan doonayo inaan adiga ku soo qaato, Douglas Karr qoraalkayguna waa 600 - 1200 erey oo tusaale ah… waxaana rabaa inaan isticmaalo xigasho mid ka mid ah qoraaladaada waxaan isticmaali doonaa xigasho waxaanan bixin doonaa sifo aan ogolaansho weydiisan.
Intaa kadib waxaad ku dirtay khadka tooska ah sidaas darteedna hadda waxaad tahay “Shakhsi dadweyne” oo haddii aan rabo inaan weydiisto ogolaansho qofkasta oo aan soo xigto, ka dib wax qorista waxay noqoneysaa wax aan macquul aheyn –dadka qaar waxay qaataan maalmo, toddobaadyo ama waligood ma soo jawaabaan Laakiin la soco qaybta ku saabsan tirada ereyada qu Tixraac wuxuu noqon doonaa 1 jumlad… 2 max sidaas darteed waxay kaliya noqonaysaa 1 jumlad laga yaabee 100 - 200 jumlado.
iyo… ma ihi garyaqaan ama waxkale midkoodna sidaa darteed tani waa dabcan, aad u badan fikirkeyga.
Jun 9, 2011 saacadu markay ahayd 10:12 AM
Midkoodna sax maahan in laga sameeyo wax kaxarka OPC (waxyaabaha dadka kale ka kooban yihiin). Waa hantida aqooneed ama fikradda la ilaaliyo. Kaliya ereyada. Maya…
Waan ku raacsanahay. Gaar ahaan marka websaydhka mashup, ama maqaalku inta badan yahay mashups.
Sideed u aragtaa waxyaabaha laga soo qaatay? Had iyo jeer waxaan ka soo qaadaa cutub ka mid ah barta internetka ee aan u arko mid xiiso leh ama dhiirrigelin ah aasaaska maqaal cusub. Had iyo jeer waxaan ku daraa isku xirnaanta dhabarka iyo amaahda.
Maaha sida aan iyaga ka dareemayo, Lorraine… waa sida milkiilaha goobta uu dareemayo. Qeybaha wali wali waa la koobiyeeynaya waxa ku jira - dhib malahan inta ay yaryihiin maaddadu. Taageerayaashu waxay oran doonaan 'goos goosku waa' adeegsi cadaalad ah 'haddii aad samaynaysid waxyaabo sida inaad dadka kale waxbarto. Si kastaba ha noqotee, kuweena leh baloog dhisaya sumadeena iyo ganacsigeena ayaa ka faa'iideysanaya qaybahaas. Xitaa haddii taasi ay tahay mid aan toos ahayn, waxaad isku arki kartaa adiga oo lagu dacweeyay.
Waxaan u maleynayaa in qeexitaanku had iyo jeer yahay adeegsi cadaalad ah. Dhibaatadu waxay tahay in dadku si qaldan u isticmaalaan una xadgudbaan fikradda guud ee isticmaalka cadaaladda ah. Su'aasha ah qayb ka mid ah waxa ay tahay iyo sida aan u qeexno waa waxa run ahaantii halkan muhiim ka ah.
Isticmaalka cadaalad ah si cad ayaa loo qeexay waana inaad akhridaa waxa loo isticmaalo cadaaladdu inay tahay. Waxaa si aad ah loogu sharaxay halkan: http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use
Waxaa jira dariiqooyin farsamo oo mulkiilaha degmadu ku soo bandhigi karo qoraal kooban, haddii qoraagu ku bixiyo tafaasilkooda tusaale ahaan, waa la fahamsan yahay in kani yahay * soociddii * annaguna nagama fadhiyin innaga oo wax qora oo wax dooranaya waa maxay sadarka aan dooneyno inaan u isticmaalno qeyb ahaan
Haddii qeexitaan aan la qeexin, markaa waxaan u maleynayaa inay caadi tahay in la isticmaalo xigasho ka timid maqaalka si loo siiyo macnaha guud ee qoraalkaaga iyo in la bixiyo xiriir. Kaliya iska hubi in maqaalkaagu yahay mid asal ah oo xigashada / soocitaanku ay kaliya u taalo si aad u sameyso dhibic ama u sheegto qof. Waa inay ahaataa qayb yar oo ka mid ah maqaalka sidaa darteed runti maahan khayaanayn ama si fudud dib looma dhihi karo, laakiin waa inay ku dhacdaa tifaftirka, naqdinta, kaftanka iyo waxyaabaha la midka ah.
Had iyo jeer waxay ku soo noqotaa tirada ereyada loo adeegsaday maqaalka asalka ah iyo inta aad qoreysid runti ma waxaad kudareyneysaa qiimaha wadahadalka ama mowduuca? Mise waxaad dib u diiwaangelineysaa waxa qof kale yiri oo maqaalkaagu wuxuu ku saleysan yahay oo keliya iyo gebi ahaanba qoraalkaas? hadaadan kudarsanaynin qiimaha, waxaan iswaydiin lahaa waxaad qabanayso. Haddii aad ku jirto gacanta kale, adigoo soo xiganaya qof ama maqaalkooda si ay u taageeraan ra'yigaaga tusaale ahaan markaa u tag. Kaliya waxay keenaysaa soo-gaadhis dheeri ah oo ku saabsan maqaalka asalka ah iyo haddii baloog-weynaha su'aasha ku jira uu ku jiro inuu lacag ka helo qoraalkooda, markaa tani waxay caawin doontaa oo keliya.
Waxaad la tartameysaa bartaada, Oscar… oo waxaad taageereysaa tayda. Furaha arrinta ayaa ah in AANAY jirin shuruud gaar ah oo caddaynaysa ama beeninaysa waxa “isticmaalka saxda ah” runti yahay. Tirada ereyada wax shaqo ah kuma laha (Eeg: http://www.eff.org/issues/bloggers/legal/liability/IP) Haddii lagu dacweeyo… waxaad aadeysaa maxkamad halkaasna ayaa lagu go'aamiyaa. Waqtigaas, malahayga ayaa ah inaad durba waqti badan ku bixisay oo macquul tahay lacag. Taasi waa ereygayga digniinta ah - dadka wax qora ee wax qora ee internetka wax ku qora waa inay taxaddaraan.
Soo-saare ahaan, waxaan ku arkaa habkan marar badan boggaga horumariyaha. Horumariyayaashu waxay koodhka ka jari doonaan barta sida Microsoft Developer Network (MSDN), oo ay ku darayaan boostadooda, waxay ku guuldareystaan ​​inay tixraac ka bixiyaan halka isha laga keenay ka dibna ay ka faalloodaan koodhka sidii inay iyagu yihiin. In kasta oo aysan si cad u sheegin inay tahay shaqadii asalka ahayd, haddana iyagu ma daliishanayaan shaqada. Tani waxay kaa tagaysaa aragti ah inay tahay shaqo asal ah oo ay iyagu awood u leeyihiin mawduuca.
Dhammaan waxyaabahan oo dhami waxay dib ugu laaban doonaan wixii aan dhammaanteen ku soo barannay, ama ay ahayd inaan ku baranno, dugsiga sare oo ku saabsan xigashada shaqo kale iyo xatooyo. In kasta oo ay umuuqato mid aan waxyeello u lahayn dad badan, haddana waa anshax xumo. Xitaa haddii boodhadhku helo rukhsad si dib loogu soo diro waxyaabaha, weli waxay leeyihiin waajibaad ah inay soo xigtaan ilaha ay ka yimaadeen.
Agoosto 29, 2011 saacaddu markay ahayd 7:45 PM
U akhri maqaalkaaga xiisaha weyn, waxaan u maleynayaa in inteena badani ay danbi ku yihiin soo dhajinta / daabacaadda nuxurka xuquuqda lahaanshaha w / o ogolaanshaha milkiilaha.
BTW, layaab uun, ma heshay ogolaansho inaad ku dhejiso sawirka Bart Simpson?
Agoosto 29, 2011 saacaddu markay ahayd 9:23 PM
Haa, waxaad arki doontaa tixraaca shaxanka hoose - oo loo isticmaalay rukhsad inta ay jirto tixraac ku jirta maqaalka oo ku laabanaysa boggooda. 🙂
Oktoobar 31, 2011 at 8:09 PM
Mid ka mid ah cusbooneysiinta tan - waxay u muuqataa in Righthaven laga yaabo inuu dhowaan ka baxo ganacsiga. Saxaafada xun iyo waxqabadka maxkamada liidata waxay ku sameynayaan si mahadsan!
Oktoobar 31, 2013 at 4:57 AM
Waxaan xiiseynayaa inaan ogaado, haddii waxyaabaha ku jira IS laga soo guuriyey degel kale. . . iyo blogger-ka ayaa markaa ka xumaada, wuxuu weydiistaa in waxyaabaha laga saaro. . . nuxurka ayaa markaa isla markiiba laga saarayaa IYO raaligelin ayaa la diraa. . . Blogger markaa xaq ma u leeyahay inuu eedeeyo?
Waad ku mahadsan tahay waxaanan rajaynayaa inaan dib kaaga soo laabto
Oktoobar 31, 2013 at 9:35 AM
Haa, Kelsey. Xatooyada nuxurku waa xatooyo, raali galinta kadib markii lagaa qabto ma badaleyso xaqiiqda. Taasi waxay tiri - Weligay kama daba tagin inaan qofna si sharci ah u raadsado markay ka saaraan.